January2020 – hoo!haa!!
IMO:EJIOGU BỤ SỌỌSỌ ONYE PDP JỤRỤ IRI NGARỊ WERE WỤFEE APC
Owere – Nwanne, ahịa zụga n’Imo ugbua, Aka na-achị Imo, Ọnwa Oyoko maga ndị Ụlọ Nzukọ Omebeiwu nkụ, gị nara, ga awufee APC. Nku anwụghịkwa nkụ ụmụ ntakịrị, ọ wụ N50 mi, tinyere ala nọpụtara anọpụta so ya nụ. Kaọdịtaa, ndị nile bụ ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ nọRead More →
NOLLYWOOD:ASỤZỤ JI EGO YA GBACHAA ORINGO, DAA N’ỌRỊA BỊA BỤRỤZỊA ONYE ARỊRỊỌ
Legọs – Na Enest Asụzụ, odogwu Nollywood dara n’ọrịa abụghịkwa akụkọ. Ihe bụ akụkọ bụ na nwoke a kpụzị efere pụtazịa iro dịka onye arịrịọ “Baabi Allah”. Ụbọchị ụka gara aga, a hụrụ ya bụ nwoke dara n’ọrịa mkpọnwụ ahụ (stroke) afọ ole n’ole gara aga na Shoprite, Surulere kaRead More →
MARLIANS: NDỊ OTU EKWENSU?
Marlians bụ ndi mmasị onye na-eti egwu aha ya bụ Naira Marley. Ihe e ji mara nwoke a bụ ise Igbo, akwamiko nakwa onyinye ndị omume ndị ọzọ ruru inyi. Ọnwa ole m ole gara aga, ndị EFCC kpọchiri ya maka ime yahoo yahoo. O jikwa egwu ya na-akwado ndịRead More →
“NWUNYE M NA ENYI YA NWOKE ACHỤPỤWO M N’ỤLỌ M” – NWOKE GWARA ỤLỌIKPE
Abụja – Mazị Devid Ishaku, onye oji ego achụ ego, nọrọ ụbọchị Wenezdee weta akwụkwọ ịgba alụkwaghịm n’Ụlọikpe Omenala nọ na Nyanya, Abuja maka nwunye ya, Lucia, onye nke ha abụọ ebighịzi. Onye mkpesa a bi na Nyanya, Abụja kwuru sị: “A gara m njem n’agwaghi nwunye m ụbọchị mRead More →
ERIWE AGWỤ AGWỤ: A GA EBULATA $321NDE ABACHA ZUPURU
Abụja – Eriwe agwụ agwụ! Ya bụ udiri ego nwoke a bụ Ọchịagha Sani Abacha zupuru na Naịjiriya buga ala bekee. Gọọmenti Etiti ga-etinye aka n’akwụkwọ n’izu ụka ọzọ iji bulata akatamkpo ego dị nde dọla Narị atọ n’iri abụọ n’otu ($321M). Ọkaikpe Ukwu nakwa Mịnịsta ala anyị na-ahụ makaRead More →
ADEBOYE EKWUOLA OKWU BUTERE ỌGBAGHARA NA TWITTER
Legọs – Ụkọchukwu Nlekọta ụlọ ụka Redeemed Christian Church of God (RCCG), Ụkọchukwu Enok Adeboye ekwuola okwu butere ọgbaghara na Twitter. Ụkọchukwu a okwu ya na – ada ụda dere n’amaozi mmekọrịta Twitter kwuo sị, “Otu nwa m nwoke gwara m na obi na-atọ ya oke ụtọ kwa ụbọchị MọndeRead More →
NDỊ GỌVANỌ AHAZICHAALA USORO ỊMALITE ATỤMATỤ NCHEKWA ALA-IGBO – ỤMAHỊ
Abakaliki – Onyeisi oche ndị Gọvanọ Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda ma bụrụkwa aka na-achị Ebonyi Steeti, Ichie Devid Umahi, nọrọ taa kwuo na ndị Gọvanọ nakwa ndịsonwere mpaghara ahụ ahazichaala usoro ịmalite atụmatụ nchekwa mpaghara ahụ. Umahi kwuru nke a ka ọ na-anabata Ọchịagha Ukwu, Mpaghara 82 ndị soja Naịjiriya, EnugwuRead More →
“OSHIOMHOLE ZUZUO ỌZỌ, M’ EMENWA YA EGWU!” – ỌBASEKI
Bini – Gọvanọ Edo Steeti, Mazị Gọdwin Ọbaseki, ekwuola na ya ga-emenwe Adams Oshiomhole, onye ọ nọchiri n’ọkwa ma bụrụkwa Onyeisi oche Izugbe otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC egwu ma o zuzuo ọzọ site na ịkpa aghara na steeti ahụ. Gọvanọ Ọbaseki kwuru na oge Oshiomhole bụ Gọvanọ, na ọ gaghịRead More →
“NDỊ GỌVANỌ, MALITENU ‘AMOTEKUN’ NKE NDIGBO TUPU NDỊ NTỌ NDỊ FULANI ESI ALA YOROBA GBALATA BE ANYỊ” – EJF
Enugwu – Otu Enugu Journalists’ Forum (EJF), nọrọ na ngwụcha izu ụka gara aga were kpọkuo ndị Gọvanọ Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda nakwa ndịsonwere mpaghara ahụ ka ha lesoro ndị Mpaghara Ọdịda Anyanwụ Ndịda anya site na ihiwe atụmatụ nchekwa mpaghara ahụ. N’ozi ahụ nke Malaki Uzendu, Onyeisi na OnyekachiRead More →
NDỊ FULANI AGBAGBUOLA ONYE NOLỊWUD
Ịlọrịn – Ndi omekome ndị Fulani agbaguola otu omebe ihe nkiri Nọliwud aha ya bụ Juwon n’ogologo ụzọ awara awara Ogbomoso/Ilorin n’ụtụtụ Mọnde n’obodo a na-akpọ Otte. Ndị omekome ahụ, site n’ozi hoo!haa!! ji ike mapụta n’etiti ụzọ bido kwawa mgbọ aghara aghara, mgbọ tụtara ya bụ nwa a adịRead More →
ỌKỤ AGBAALA OGIGE NEW BERRIES PARK, ENUGWU
Enugwu – Ọkụ nọrọ ụnyahụ gbaa ogige New Berries Park, Enugwu were mebie akụnụba ruru nde pụrụ nde Naira. Ozi hoo!haa!! nwetara gosiri na ọkụ ọgbụgba ahụ malitere oge ọkụ sitere n’ebe a na-agba ihe ọkụ danyere n’ata e jiri rụọ ụlọ ebe ahụ. Ụlọ ọrụ Ntinyụ ọkụ Enugwu SteetiRead More →
ENUGWU: AKA AKPARALA NDỊ NTỌ NDỊ FULANI NA-AKPA IKE
Enugwu – Aka ndị Uwe Ojii akparala ndị ntọ ndị Fulani mmadụ atọ na-akpa ike n’Enugwu Steeti. Ha gụnyere; Adamu Mohammed (Taraba Steeti) , 25, Musa Ibrahim (Katsina Steeti) , 28, na Dauda Alhaji ( Nasarrawa state), 31 bụ ndị Uwe Ojii jidere n’ebe ha zogasịrị n’Ebọnyi Steeti n’abalị iriRead More →
NWOKE ATỤWALA ỌGỌ YA BỊARA ỌMỤGỌ IME
Lafịya – Mazị Kristova Chori atụwala Priscillia Kwange, ọgọ ya nwanyị bịara ọmụgọ ime. Ebe okwu nọrọ taa ákpụ́ bụ na nwanyị ahụ amụtabeghiri di ya, Silvanus Kwange nwa ọbụla kemgbe afọ iri ha lụrụ. Faith Chori, nwunye Kristova Chori bụ nwa di ya Silvanus mụtara n’aka nwanyị mbụ ọRead More →
NSOGBU EEDC: OTU NDIGBO UNITED FORUM EMEELA NGAGHARỊ IWE KPỤ ỌKỤ N’ỌNỤ
Enugwu – Otu Ndigbo United Forum (NUF), bụ otu na-ahụ maka ọdịmma Ndigbo nọrọ taa wee mee ngagharị iwe kpụ ọkụ n’ọnụ na steeti ise dị na mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda were megide ụlọ nkesa ọkụ EEDC. Ndị mmadụ pụtara ìgwè were sonyere ndị NUF na ya bụ ngagharị iwe,Read More →
Legọs – Kaọdịtaa, Sinetọ Shehu Sani ga-ejekwa nga ma ọ kpachaghị anya n’okwu ya na ndi EFCC. Ka a kpọchichara ya n’aka ndị EFCC nke abalị iri atọ n’otu nke ọnwa Disemba afọ 2019, a kpụgara ụlọikpe taa n’Abuja maka ebubo iji aghụghọ napụ mmadụ ego. Ọkaikpe Inyang Ekwo jiriRead More →
Meiduguri – Gọvanọ na-achị Boronu Steeti, Ọkammụta Babagana Umara Zulum ekwuola hoo!haa! na asịrị a na-ewu ebe nile na ọ sịrị na ndị agha ala anyị bụ aka ọrụ ndị aghara. Ọkammụta Zulum kwuru nkea n’ozi ọ tinyere na Twitter ya @Prof Babagana Umara Zulum. O dere sị, “Dịka okwu ndịRead More →
Legọs – Nnukwu Ụkọchukwu ụlọ ụka The Second Coming Of Jesus Christ, Adewale Giwa, ekwuola hoo!haa!! na aka Onyeisiala Muhammadu Buharị jupụtara n’ọbara. Giwa kwuru na nkea bụ maka na Buhari agbadobeghi ụkwụ n’ala ibu agha megide ndị oyi ọha egwu na Naịjiriya. Ụkọchukwu ahụ ji ọchịchị Buhari tụnyere Jehoram,Read More →
Ụmụ amaala Naịjiriya abụọ okwu ha na-apụ anwụrụ ọkụ nọrọ ụnyahụ were kwaa Onyeisiala Muhammadu Buharị emu maka ikwu na ya ga-emeri Boko Haram. Femi Fani-Kayode(FFK), onye bụbu Mịnịsta na-ahụ maka Njem Ụgbọelu kwuru na Buhari enweghị ike imeri Boko Haram bụ ndị ọ sịrị tinyere ya n’ọkwa. N’ozi yaRead More →
Ụmụahịa – Ọgụ bịara ịda ụnyahụ n’Oboro Street, Ụmụahịa n’etiti Ndigbo na ndị Awụsa oge otu nwoke bịara ịzụ akị Awụsa tiri mkpu na Aboki na-ere aki Awụsa zuuru amụ ya. Ka nwoke ahụ nyere Aboki ahụ ego, Aboki ahụ metụrụ ya aka n’ahụ n’udi itichapụ ihe dakwasịrị ya n’àkwà.Read More →
Legọs – Ndi Uwe Ojii akpụrụla nwoke nwanyị, Bobrisky n’ime abalị ụbọchị Wenezdee na be ya nọ na Bera Estate, Chevron Drive,Lekki. Mkpọchi a kpọchiri ya bụ maka ajọ akparamagwa ya site ndụ ịgbanwe onwe si na nwoke banye nwanyị bụ nke ọ na-ebi. Otu onye n’ime ndị Uwe OjiiRead More →